Ọkachamara dị mma nke ọma 100-240Vac, Driving Power Supply Board, Dimming Led Driver Manufacturer in China
Nkọwa:Ọkwọ ụgbọ mmiri 100-240Vac Led Driver,50W 1200Ma Led Driver,Board Power Supply Board,Dimming Driver,,
Home > Ngwaahịa > Onye na-akwọ ụgbọala na-acha ọkụ ọkụ > Ọkwọ ụgbọ mmiri 100-240VAC Led Driver
Ngwaahịa nke Ọkwọ ụgbọ mmiri 100-240VAC Led Driver , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ọkwọ ụgbọ mmiri 100-240Vac Led Driver , 50W 1200Ma Led Driver suppliers / factory, wholesale high-quality products of Board Power Supply Board R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ike Ịzụta Ụdị Igodo Mmiri Ndugharị nke Ọkwọ ụgbọala  Kpọtụrụ ugbu a
Udiri ọkụ ọkụ 500MA 20W 100-240V  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe nkedo akwa nke 0-10V Dimmable LED Driver 45W  Kpọtụrụ ugbu a
60W 0-10V Dimming Led Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Ike Ịzụta Ụdị Igodo Mmiri Ndugharị nke Ọkwọ ụgbọala
Ọnụahịa otu: USD 3.5 / Piece/Pieces
Nke a na-akwọ ụgbọala ọkwọ ụgbọala 100-240V ọkụ ọkụ ngwaahịa. Onye na-akwọ ụgbọala ọ bụla ga-ebelata oge ndụ nke ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ panel, n'ihi ya, a na-atụ aro ka ị jiri ọkwọ ụgbọala ọkụ. Ike Ịgba Ọkụ nke oma Akwụkwọ ikike afọ 3! Egwuregwu Ndị...
Udiri ọkụ ọkụ 500MA 20W 100-240V
Ọnụahịa otu: USD 4.3 / Piece/Pieces
Nke a na-akwọ ụgbọala ọkwọ ụgbọala 100-240V ọkụ ọkụ ngwaahịa. Onye na-akwọ ụgbọala ọ bụla ga-ebelata oge ndụ nke ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ panel, n'ihi ya, a na-atụ aro ka ị jiri ọkwọ ụgbọala ọkụ. Ọkwọ ụgbọala 240V Akwụkwọ ikike afọ 3! Emere ya site na...
Ihe nkedo akwa nke 0-10V Dimmable LED Driver 45W
Ihe nkedo akwa nke 0-10V Dimmable LED Driver 45W Usoro HW45W-02 bụ Ọkwọ ụgbọala na-agba chaa chaa na ọrụ atọ na atọ. Ngwunye nke MaxPputation na-enye ohere dị 90-305V, yana nnukwu ihe dị ike. A haziri onye ọkwọ ụgbọala a maka ọkụ ọkụ ọkụ, ọkụ ọkụ...
Ọnụahịa otu: USD 7.2 / Piece/Pieces
Isi Nke a bụ ụgbọala 60W PWM Dimming LED Driver na ahịa n'ihi na ọ dị obere, imepụta pụrụ iche, ike dị elu na ogologo ogologo oge. Ọ na-arụ ọrụ maka ikanam Panel, ikanam nsogbu, ikanam ìhè na ihe ndị ọzọ, E wezụga nke ahụ, a na-echekwa ngwugwu...
China Ọkwọ ụgbọ mmiri 100-240VAC Led Driver Ngwa
Ụlọ ahụ na-agba chaa chaa
Voltage Single, Ike 180-240V, nkwakọba akpụkpọ anụ plastik, maka ọkụ ọkụ ọkụ panel, ihe ka ọtụtụ n'ime ahịa ndị Europe, ike ime ụlọ na-enweghị mmiri, n'ozuzu akwụkwọ ikikere CE, afọ atọ nke afọ, ṅaa ntị na nsogbu okpomọkụ, iji zere eji akwa okpomọkụ.
Ọkwọ ụgbọ mmiri 100-240Vac Led Driver 50W 1200Ma Led Driver Board Power Supply Board Dimming Driver Ọkwọ ụgbọ mmiri 24v